ဂျပ်စင်မဟုတ်သော စာရွက်စက်ဆီသို့ လိပ်
လှုပ်ရှားမှုတွင် Corona-Dele Intelligent Technology ကုမ္ပဏီကို တိုက်ခိုက်ပါ။
တစ်မြို့တည်း၊ နှလုံးသားတစ်ခုတည်း! ခိုင်ခံ့သောယုံကြည်မှု၊ ဒုက္ခရောက်ချိန်၌ အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ သိပ္ပံနည်းကျကာကွယ်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မှု၏ ကောင်းသောအလုပ်မှာ အခြားသူများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ 30 ရက်နေ့ ညနေတွင် Yan shan ကူးစက်ရောဂါအခြေအနေကြေငြာချက်ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် Jiangxi Dele Intelligent Tec ...
Jiangxi Dele Intelligent Technology Co., Ltd. ကို 2010 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယက်မဟုတ်သော ထည်ထည်လုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာလုပ်ငန်း၏ ရှေ့ဆုံးမှ အဆင့်တွင် ရပ်တည်လျက်ရှိပြီး ယက်မလုပ်သော အထည်ကြမ်းမှ ပထမဆုံးသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ပစ္စည်း၊ စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ...
4th World Cloth Conference သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဦးတည်ချက်အသစ်ကို စူးစမ်းလေ့လာပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတု အုပ်ချုပ်မှု အခြေအနေသည် ပို၍ အရေးတကြီး ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန် တွန်းအားပေးသည့် အင်ဂျင်အသစ် ဖြစ်လာပြီး ကာဗွန်အထွတ်အထိပ်နှင့် ကာဗွန်ကြားနေ ပန်းတိုင်များသည် လူသားတို့အတွက် မျှဝေခံစားနိုင်သော အနာဂတ်ရှိသော အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် မလွဲမသွေ ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ...
အထည်အလိပ်နယ်ပယ်တွင် အနံ့ရှိသော မိုက်ခရိုဆေးတောင့်ကို အသုံးပြုခြင်း။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ရနံ့ကုထုံးနှင့် ရနံ့ဆိုင်ရာ စိတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်သော အသားအရေနှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းဆောင်တာများကဲ့သို့ မွှေးကြိုင်သော အထည်အလိပ်များကို မွှေးကြိုင်သော အထည်အလိပ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ လက်ရှိတွင် အဓိကရနံ့ အထည်အလိပ်ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းများကို အနံ့အရသာနှင့် အနံ့အရသာ ခွဲခြားနိုင်သည်။ မိုက်ခရို...
စတုရန်းဖယ်ထုတ်သည့် ချည်ပြားစက်ကို နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
1. စက်တစ်ခုလုံးကို နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး သုတ်ပါ၊ လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးများ လွတ်သွားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာများကို စက်ပေါ်တွင် မထားရှိသင့်ပါ။ 2. နေ့စဥ်မဖွင့်မီ စက်၏ ဂီယာခါးပတ်အား စစ်ဆေးပါ၊ ဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိပါက ဂီယာကြိုးကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ...
Chung Yeung ပွဲတော်
Deli Intelligent Technology- -သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ယခု Chung Yeung Festival ဟုခေါ်သော နှစ်ထပ်ကိုးထပ်ပွဲတော်။ အဆိုပါနှစ်ထပ်ကိုးကြိမ်မြောက်ပွဲတော်သည် တရုတ်လူမျိုးများ၏ ရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် နှစ်ငါးထောင်တိုင်တိုင် တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်...
Jiangxi Dele Intelligent Technology Co.,Ltd ပွဲတော် အလယ်အလတ်ဆောင်းဦးပွဲတော်
21-09-19 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ဆောင်းဦးပေါက်ပွဲတော်သည် တရုတ်ရိုးရာပွဲတော်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ သို့မဟုတ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပလေ့ရှိပြီး မိသားစုဝင်များ စည်းလုံးညီညွတ်ကာ လကိတ်များမှာ ပဲငပိ၊ ကြက်ဥအနှစ် သို့မဟုတ် လကိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော လကိတ်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ညနေခင်းမှာ...
စည်ပင်သာယာရေးဗျူရိုက ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု အခြေအနေကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး တည်ငြိမ်သော နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်စေရန်၊ မြို့တော်၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု တည်ငြိမ်တိုးတက်ရေးနှင့် အရည်အသွေး မြင့်မားတိုးတက်စေရန်အတွက် မြို့တော်၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနများနှင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအား ကူညီပေးနိုင်ရန်၊
Jiangxi Dele Technology Intelligent Co., Ltd.သည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို နွေးထွေးစွာ ဂုဏ်ပြုပါသည်။
Dele Technology သည် ပါတီ၏ အလုံးစုံဦးဆောင်မှုကို အမြဲလိုက်နာပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အုတ်မြစ်ချကာ ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေသည်။ လက်သည်းမှအစ ယက်မဟုတ်သော စက်နှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ပြီးမြောက်သည်အထိ...
ထုတ်လုပ်မှုဘေးကင်းရေးသည် Tai Mount ထက် ပိုလေးသည်။
ဇွန်လသည် ဘေးကင်းရေး ထုတ်လုပ်မှုလဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ဌာနအားလုံးသည် စက်ရုံဒါရိုက်တာ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဘေးကင်းရေး ထုတ်လုပ်မှု အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပါသည်။ ဒါရိုက်တာ Yu Sun က အဓိကကျတဲ့ အလုပ်တွေကို ကိုင်တွယ်ပြီး လုံခြုံတဲ့ အောက်ခြေလိုင်းကို တည်ဆောက်ပါ။ ...
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။
Jiangxi Dele Intelligent Technology Co., Ltd.၊ အဖွဲ့တစ်ခုစီ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးစီအား စားပွဲဝိုင်းငယ်များကျင်းပရန်၊ တန်ပြန်အစီအမံများ ဆွေးနွေးရန်နှင့် တင်းမာမှုများပြုလုပ်ရန် အထူးစီစဉ်ထားပါသည်။
အလုပ်သမားများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း-Dele နည်းပညာခေါင်းဆောင်များ ဖျားနာသောဝန်ထမ်းများထံ သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်း။
2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သော Xinfa Huang ၏ဇနီးသည် ကံမကောင်းစွာဖြင့် ပြင်းထန်သော ရင်သားနှစ်ထပ်ထိုးဖောက်ပြန်ကင်ဆာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်ဖျားနာခြင်း၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအခြေအနေနှင့် ကုသစရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းတို့သည် အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်...
လိပ်စာ- Xiangtun အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုဥယျာဉ် Dexing မြို့ Shangrao မြို့ Jiangxi ပြည်နယ် တရုတ်နိုင်ငံ